DEG DEG: Walaac ka taagan xaafadda Rinkeby ka dib markii booliska halkaasi lugu dhagaxyeeyey | Somaliska
Wararka ayaa sheegaya in garabka laga dhaawacay askari ka mid ah askartii howlgalkaasi fulineeysay. Taasina waxaa ay qasabtay in xabadaha digniintaas ahi cirka u tuuraan. Dad goob joog ayaa telefeyshinka SVT u sheegay in xaaladu ay kacsaneeyd. Goobo ku yaala xaafadda Rinkeby ayaa lugu gubay toddobo gaari oo dhex yiilay baarkimadda xaafadda. Ciidamadda dab damiska ayaan suuragal u noqon ineey galaan gudaha halka lugu gubay baabuurta, sababo la xirriira kooxo halkaasi ku dhagaxeeynaya booliska iyo kooxaha dab demiska. Saxafi madax banaan oo telefeyshinka u warmayey kuna sugan goobta ayaa sheegay in walaaca halkaasi ka jira ay u ekeyd goob dagaal.
Dhibaatada kala haysata waalidiinta iyo caruurta Soomaaliyeed ee Sweden